Healthcare workers pushapatient intoaless intensive unit from the Covid-19 Unit at United Memorial Medical Center in Houston, Texas on July 2, 2020. - Despite its renowned medical center with the largest agglomeration of hospitals and research laborat
အသက် (၅၀) အထက် နှင့် COVID-19 ကူးစက်မှု
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူပေါင်း ၂၆၀,၀၀၀ ကျော်ထဲ ၉၅% နှုန်းဟာ အသက်(၅၀) အထက်အရွယ်တွေ ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန် ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး CDC မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဒေါက်တာမင်းမင်းစိုးက ပြောပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံး လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေထဲ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အသက်နဲ့ အချိုးကျနေတာတွေ့ရပြီး အသက်ကြီးလေလေ ပိုပြီးကူးစက်ခံရမှု ပိုပြီးရှိလာလေလေ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာမင်းမင်းစိုးက ပြောပါတယ်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါ ရဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ထူးခြားချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါက်တာမင်းမင်းစိုးကို မအင်ကြင်းနိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး ။ ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ နောက်ပိုင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူတွေရဲ့  ရောဂါလက္ခဏာတွေက အရင်ကူးစက်ခံရတဲ့ အချိန်တုန်းက ဖြစ်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားမှု ရှိပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ ။ ။ ဘာမှတအားကြီး ကြီးကြီးမားမား ခြားနားပြောင်းလဲလာတာတော့ မတွေ့ရဘူး။ ဟိုတုန်းကတော့ ဖြစ်ခါစဆိုတော့ ဒီလိုလက္ခဏာကော ဖြစ်နိုင်သလား။ ဟိုလိုလက္ခဏာကော ဖြစ်နိုင်သလား။ ဒေတာစုနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ တစ်ခုအသစ်အဆန်း လက္ခဏာ ကိုဗစ်ပတ်သက်ပြီး ပေါ်လာတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့က document လုပ်ပြီး ပြည်သူကို အသိပေးတယ်။ အခု (၆) လ (၇) လ ရှိသွားပြီဆိုတော့ လက္ခဏာတွေက တအားကြီး စတွေ့ခါထက် ထူးထူးခြားခြား ပိုပြီးတော့ မတွေ့လာဘူး။ အထူးသဖြင့် အနံ့မရတာနဲ့ ပါးစပ်အရသာ ပျက်သွားတာ၊ အဲဒီဟာလေးပဲ နည်းနည်းထူးထူးခြားခြား တွေ့ရတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ ပုံမှန်ရာသီတုပ်ကွေးတွေမှာ ဖြစ်သလိုပဲ ချောင်းဆိုးတယ်၊ အသက်ရှုကြပ်တယ်၊ အဖျားရှိတယ်ဆိုတော့ ဘာမှ ကိုဗစ်လက္ခဏာ တိတိကျကျ ပြောဖို့က ခက်တယ်။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု မလုပ်ဘဲနဲ့ ပြောဖို့က အရမ်းခက်တယ်။
မေး ။ ။ အခုလက်ရှိ အမေရိကန်က ကူးစက်မှု အဆိုးဆုံး၊ အများဆုံး၊ လူသေမှု အများဆုံး နိုင်ငံထိပ်ဆုံးမှာပဲ ရှိနေဆဲဆိုတော့ ဆရာတို့ အခု ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးမှာ ဆရာတို့ အဓိကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ စိတ်ခေါ်မှုတွေက ဘာတွေပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဒီနိုင်ငံမှာက ကမ္ဘာမှာ အမြင့်ဆုံးကူးစက်မှု ဖြစ်နေတယ်။ အထူးသဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ပျံ့ နှံမှုတွေက တနေ့တနေ့ဆိုရင် လေးငါးသောင်း နေ့စဉ် ရှိနေတယ်။ ဒါကကူးစက်မှု အနည်းဆုံး - တချို့ နေတွေမှာဆိုရင် သိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ ဖြစ်ကုနတယ်။ ဒီလို Community Transmission လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ပျံ့ နှံ့မှု အရမ်းများလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အစိုးပိုင်းအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဌာနဆိုင်ရာပိုင်တွေက Contact tracking တွေကိုတောင် သိပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ လုပ်လဲမလုပ်တော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခြေအနေက contact tracing လိုက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် resources တွေ ကျနော်တို့ဆီမှာ မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ တတ်နိုင်သမျှ ရောဂါရှိမရှိ များများစစ်မယ်၊ များများတွေ့မယ်။ တွေ့တယ်ဆိုရင် ချက်ခင်း ဒီလူနာနဲ့ သူ့ရဲ့ မိသားစုကို ချက်ချင်းအိမ်မှာပဲနေခိုင်းမယ်။ အကောင်းဆုံး treatment ပေးမယ်။ တတ်သမျှ ဆေးရုံကို မခေါ်ဘူး။ တော်တော်အခြေအနေဆိုးမှပဲ ဆေးရုံကို ပေးတတ်တယ်။ ဒီလောက်အခြေအနေ မဆိုးဘူး၊ တော်ရုံတန်ရုံ အဖျား၊ ချောင်းဆိုးလောက်ပဲဆိုရင် အိမ်မှာပဲနေခိုင်းတယ်။ ဆေးခန်းမှာကုတယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ .. ဆေးရုံပေးတတ်တာတို့၊ ကွာရန်တင်စင်တာ ပို့တာတို့ ဒါတွေ ကျနော်တို့ မလုပ်ဘူး။ လုပ်ဖို့လည်း အခြေအနေက မပေးတော့ဘူး။ တနေ့တနေ့ သောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီး ကူးနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်။
မေး ။ ။ အဲဒီတော့ ဒီကူးစက်မှုအနေအထားအရကြည့်မယ်၊ သေဆုံးမှု အနေအထားကို ကြည့်ရတဲ့အခါကြတော့ ဘယ်လိုလူတွေမှာ ပိုပြီးတော့ ကူးစစ်မှုတွေ များနေသလဲ။ နောက်ပြီးတော့ သေဆုံးတဲ့လူတွေထဲမှာ အသက်အရွယ်အရဖြစ်ဖြစ် ဘယ်အပိုင်းက သေဆုံးမှုအများဆုံး ဖြစ်နေသလဲဆရာ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ အထူးသဖြင့် မတ်လလောက်ကစပြီး ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာနအနေနဲ့ စောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ စောင့်ကြည့်တော့ ဘာတွေ့ရသလဲဆိုတော့ အများစု လွန်ခဲ့တဲ့ မတ်လကနေ နိုဝင်ဘာလအထိ အဲဒီကာလအတွင်းမှာ အများစု ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူ အသက်အရွယ်ပိုင်းက (၁၈) နှစ်နဲ့ အသက် (၅၀) အကြား လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေပိုင်းတွေမှာ အများဆုံး ကူးစက်ခံရတာ တွေ့ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့တွေက အခြားအသက်အရွယ် ကလေးတွေထက်စာရင် လူကြီးအသက်ကြီးသူတွေထက် ပိုပြီးတော့ အိမ်ပြင်ပကို ထွက်တဲ့အတွက် exposure ပိုများတယ်။ ရောဂါပိုကူးစက်ခံရဖို့ အခွင့်အရေးက ပိုများတော့ ပိုပြီးတယ်။ အဲဒီတော့ လူငယ်နဲ့ လူလတ်ပိုင်းတွေမှာ အများစု ကူးစက်ခံရတယ်။ ကူးစက်ခံရတဲ့ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်လောက်က အဲဒီအသက်အရွယ်ပိုင်ခြားမှာ အဓိကပဲ။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လူကြီးဆိုရင် (၆၅) အထက်လို့ သတ်မှတ်တယ်။ (၆၅) အထက်ဆိုရင် ကူးစက်ရာခိုင်နှုန်းက (၁၅) ရာခိုင်နှုန်းအောက်လောက်မှာပဲ ရှိတယ်။ သိပ်မများလှဘူး။ အဓိကသည် လူငယ်နဲ့ လူလတ်ပိုင်းမှာ အဓိကတွေ့နေရတယ်.
သူတို့တွေက အလုပ်သွားတယ်၊ အပြင်သွားတယ်။ တွေ့ဆုံပွဲတွေ လုပ်ကြမယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီကနေပဲ အဓိက ကူးစက်ခံရတာကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒီတော့ လူငယ်နဲ့ လူလတ်မှာ အဓိကကူးစက်မှုများတယ်။ ဒါပေမဲ့ သေဆုံးတာတွေ၊ ပုံမှန်ရောဂါ ကူးစက်ခံရတဲ့ လူငယ်တွေဆိုရင် အများအားဖြင့်က ဒီအတိုင်းပဲ သူ့ဘာသာသူ ခပ်မြန်မြန် ပြန်ပျောက်သွားတယ်။ သူတို့ရဲ့  ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းတဲ့အတွက်။ လူကြီးတွေကြတော့ ကိုယ်ခံစွမ်းအား မကောင်းဘူး။ နောက် လူငယ်တွေနဲ့ လူလတ်ပိုင်းတွေမှာ သူတို့မှာ အခြေခံနောက်ဆက်တွဲ ရောဂါ ရှိခဲ့ရင်။ ဥပမာ ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အဆုပ်ရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါတွေ။ ဒီလို တစ်ခုခု ရောဂါရှိတဲ့ လူငယ်လူလတ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နောက် အထူးသဖြင့် လူကြီးတွေမှာ ဒီလိုလူတွေမှာတော့ သေဆုံးနှုန်းက အရမ်းကို မြင့်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်မှာ သေဆုံးတဲ့လူ အခုဆိုရင် နှစ်သိန်းလောက် ရှိပြီ။ အဲဒီတော့ ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းက အသက် (၆၅) နှစ်အထက်။ အဲဒီတော့ တော်တော်လေးကို အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ အသက်ကြီးတဲ့လူတွေအတွက်။ (၁၅) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ အသက် (၅၀) နဲ့ (၆၅) နှစ်ကြား။ ဆိုလိုချင်တာက အသက် (၅၀) အထက်က (၉၅) ရာခိုင်နှုန်း သေဆုံးမှုထဲမှာ ရှိတယ်။ ဆိုတော့ ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါကြောင့်လဲ အသက်ကြီးတဲ့လူတွေအတွက် အခြားရောဂါအခံ အကြောင်းရင်းတွေရှိတဲ့ လူတွေ တတ်နိုင်သမျှ အိမ်မှာပဲ နေခိုင်းတာ။ အဲဒီအချက်ကြောင့်ပဲ။ ရောဂါပိုးခံရတဲ့လူက ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ လူငယ်၊ လူလတ်ပိုင်းမှာ များပေမယ့် တကယ့် complication တွေ၊ ရောဂါပိုဆိုးလာတာတွေ၊ သေတာတွေ ပိုတွေ့ရလာတော့ အသက်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ လူငယ်လူလတ်ပိုင်းမှာဆိုရင်လဲ အခြေခံအခြားရောဂါ ရှိသူတွေဖြစ်တာကြောင့် အဲဒါကြောင့် အဲဒီလူတွေက ပိုပြီးတော့ ဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။
မေး ။ ။ အဲဒီတော့ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က သူက အသက်အရွယ်ပေါ် လိုက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလဲ။ ဥပမာ ကလေးတွေ အရင်တုန်းက ကူးစက်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုတာတွေ ရှိလာပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း ကူးစက်မှုနှုန်းတွေ ဆက်ပြီးများလာနေတဲ့အထဲမှာ ကလေးတွေ - (၁၈) နှစ်အောက် ကလေးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် မွေးကင်းစကလေးတွေ။ အဲဒီလိုမျိုးတွေအပါအဝင် ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့  သက်ရောက်မှုက ဘယ်လောက်အထိ ရှိပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒါကတော့ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က အသစ်အဆန်းလည်း ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူမှလဲ မတွေ့ဖူးဘူး။ ကျနော်တို့ တတ်နိုင်သမျှ တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ဒေတာတွေ။ အထူးသဖြင့် အမေရိကမှာ ဆေးရုံတွေမှာရှိတဲ့ ဒေတာတွေကို ကောက်ယူပြီးကြည့်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ ဒေတာတွေက ဘာပြနေလဲဆိုတော့ ကိုဗစ်က တကယ့်တကယ်ကြတော့ အသက်နဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျနေတာကို တွေ့ရတယ်။ အသက်ကြီးလေလေ၊ ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု အခွင့်အရေးက ပိုများလေလေ ဆိုတာကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒါကြောင့် အသက်အရွယ်က အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ အသက်အပိုင်းအခြား - ကိုယ်က အသက်ကြီးရင်ကြီးသလို ကူးစက်ခံရဖို့ အခွင့်အရေးက ပိုပြီးများလာတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါကတော့ တစ်အချက်ပေါ့။ အရမ်းလည်း အရေးကြီးတယ်။ အခုနပြောသလို လူငယ်၊ လူလတ်တွေမှာ အများစုတွေ့နေတယ်ဆိုတာက သူတို့က အပြင်ထွက်နှုန်းက ပိုများလို့။ တကယ့်တကယ်ကြတော့ အကုန်အသက်အကြီးအငယ်မရွေး အကုန်လုံး အပြင်ထွက်နေမယ်ဆိုရင် လျှောက်ပြီးသွားနေမယ်ဆိုရင် လူကြီးတွေက အဓိကထိမှာပဲ။ ဆိုလိုချင်တာက ကူးစက်မှု အခွင့်အရေး၊ chance and risk က အသက်နဲ့အမျှ အသက်ကြီးလာလေ ပိုမိုပြီးတော့ အခွင့်အရေး ပိုများလာမယ်။ အဲဒီလိုပဲ တချိန်တည်းမှာပဲ ရောဂါဝင်သွားပြီဆိုရင်လဲ အသက်ငယ်သူထက် အသက်ကြီးသူက complication ပုံမှန်ရိုးရိုးတန်းတန်း ပြန်ပျောက်သွားမယ့်အစား အဆုတ်ကို ပိုမိုပြီး ပျက်စီးစေတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ တကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ အခြားကျောက်ကပ်တွေ၊ နှလုံးတွေ - ဒီလိုဟာတွေကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အခွင့်ရေးက လူကြီးတွေမှာ ပိုများတယ်။ နောက် လူငယ်လူလတ်ဆိုလဲ အခြားရောဂါရှိတဲ့လူတွေမှာဆို အခွင့်ရေးက ပိုများတာကို တွေ့ရတယ်။
မေး ။ ။ အဲဒီတော့ ကလေးတွေမှာ ဥပမာ မူလတန်းတွေ၊ အလယ်တန်းတွေ၊ မူကြိုကလေးတွေမှာကော သူတို့ကို ဗိုင်းရပ်စ်က ကူးစက်မှုနှုန်း နည်းတယ်လို့ ပြောလို့ရသလား။ ဒါမှမဟုတ် ကူးစက်နေပေမယ့်လဲ သူတို့က ဘာမှ ရောဂါမပြဘဲနဲ့ ရောဂါဝေဒနာ မခံစားရဘူးလား။ အဲဒီလိုအရွယ်တွေက ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်ကတော့ relative term ပဲ ပြောတာပါ။ အသက်အရွယ်တိုင်းမှာတော့ risk အန္တရာယ်က ရှိနေတယ်။ လူကြီးနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ လူငယ်တွေက နည်းနည်းလေး risk နည်းတယ်ပေါ့။ အခုနပြောသလို အသက်ကြီးလာလေ၊ အန္တရာယ်ကတော့ ပိုကြီးလာတဲ့ သဘောပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လူငယ်တွေမှာကော မရှိဘူးလားဆိုတော့ အန္တရာယ်ကတော့ ရှိနေတာပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ ကလေးတွေမှာလည်း ကူးစက်ခံရတာတွေ တွေ့နေရတယ်။ ကျနော်တို့ ပိုကြောက်တာက အခုနပြောသလို probably အနေနဲ့ ပြောတာကတော့ risk က အသက်ကြီးရင် ပိုများတယ်။ ဒီလိုပဲ လူငယ်လူလတ်မှာလည်း ရောဂါအခြေခံရှိရင် အန္တရာယ်ကြီးတယ် ပြောပေမယ့် သာမန်ကျန်းမာနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကလည်း ဒီရောဂါဝင်သွားခဲ့ရင် အချိန်မရွေး သေဆုံးသွားနိုင်တာကို တွေ့ရတယ်။ ကျနော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်က ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တယ်။ တုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာ တခါတလေကြတော့ ပုံမှန်ထက်ကို ပိုပြီးတော့ တုံ့ပြန်တာတွေကို တွေ့ရတယ်။ တချို့ လူတွေမှာ လူငယ်ပိုင်းတွေကအစ … ဒီလိုတုံ့ပြန်မှုက ပုံမှန်ထက် ပိုပြီးများလာရင် …. ဒီလူဟာ အရင်တုန်းက ဘယ်လောက်ပဲ ကျန်းမာကျန်းမာ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ပုံမှန်ထက် မတရားကို ပြန်ပြီးတော့ တုံ့ပြန်တဲ့အတွက် ဒီလူဟာ အချိန်မရွေး သေဆုံးသွားနိုင်တယ်။ အဲဒါကြောင့်မလို ကျနော်တို့ ကလေးလေးတွေမှာ ဒီအမေရိကမှာဆိုရင် ကျောင်းတွေ တချို့ ပြည်နယ်တော်တော်များများမှာ မဖွင့်သေးဘူး။ မဖွင့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဒီကလေးတွေ risk က လူကြီးထက်စာရင် နည်းပေမယ့် တကယ် ဒီကလေးကို ပိုးဝင်သွားရင် ဒီကလေးမှာ ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ဘူး။ အခုနပြောသလို …… တွေ ဝင်လာမယ်။ ဒီကလေးရဲ့  body immunity ကိုယ်ခံအားတုံ့ပြန်မှုက ပုံမှန်ထက် ပိုမြင့်လာပြီဆိုရင် ဒီကလေးက သေသွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်တို့ ကျောင်းတွေကို အခုအချိန်အထိ တတ်နိုင်သမျှ ပြည်နယ်တော်တော်များများမှာ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေက မဖွင့်သေးဘူး။
…. အမေရိကန်ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး CDC မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဒေါက်တာမင်းမင်းစိုး ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ သဆေုံးသူပေါငျး ၂၆၀,၀၀၀ ကြျောထဲ ၉၅% နှုနျးဟာ အသကျ(၅၀) အထကျအရှယျတှေ ဖွဈတယျလို့ အမရေိကနျ ကူးစကျရောဂါ ကာကှယျထိနျးခြုပျရေး CDC မှာ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ ဒေါကျတာမငျးမငျးစိုးက ပွောပါတယျ။ အရေးကွီးဆုံး လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှထေဲ ဗိုငျးရပျဈဟာ အသကျနဲ့ အခြိုးကနြတောတှရေ့ပွီး အသကျကွီးလလေေ ပိုပွီးကူးစကျခံရမှု ပိုပွီးရှိလာလလေေ ဖွဈတယျလို့ ဒေါကျတာမငျးမငျးစိုးက ပွောပါတယျ။
COVID-19 ကပျရောဂါ ရဲ့ဗိုငျးရပျဈကူးစကျမှု ထူးခွားခကျြတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ ဒေါကျတာမငျးမငျးစိုးကို မအငျကွငျးနိုငျက ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
မေး ။ ။ အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာ နောကျပိုငျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရသူတှရေဲ့ ရောဂါလက်ခဏာတှကေ အရငျကူးစကျခံရတဲ့ အခြိနျတုနျးက ဖွဈတဲ့ရောဂါလက်ခဏာတှနေဲ့ ဘယျလိုကှာခွားမှု ရှိပါသလဲ ဆရာ။
ဖွေ ။ ။ ဘာမှတအားကွီး ကွီးကွီးမားမား ခွားနားပွောငျးလဲလာတာတော့ မတှရေ့ဘူး။ ဟိုတုနျးကတော့ ဖွဈခါစဆိုတော့ ဒီလိုလက်ခဏာကော ဖွဈနိုငျသလား။ ဟိုလိုလက်ခဏာကော ဖွဈနိုငျသလား။ ဒတောစုနတေဲ့ အခြိနျမှာပဲ ရှိသေးတယျဆိုတော့ တဈခုအသဈအဆနျး လက်ခဏာ ကိုဗဈပတျသကျပွီး ပျေါလာတယျဆိုရငျ ကနြျောတို့က document လုပျပွီး ပွညျသူကို အသိပေးတယျ။ အခု (၆) လ (၇) လ ရှိသှားပွီဆိုတော့ လက်ခဏာတှကေ တအားကွီး စတှခေ့ါထကျ ထူးထူးခွားခွား ပိုပွီးတော့ မတှလေ့ာဘူး။ အထူးသဖွငျ့ အနံ့မရတာနဲ့ ပါးစပျအရသာ ပကျြသှားတာ၊ အဲဒီဟာလေးပဲ နညျးနညျးထူးထူးခွားခွား တှရေ့တယျ။ ကနျြတာတှကေတော့ ပုံမှနျရာသီတုပျကှေးတှမှော ဖွဈသလိုပဲ ခြောငျးဆိုးတယျ၊ အသကျရှုကွပျတယျ၊ အဖြားရှိတယျဆိုတော့ ဘာမှ ကိုဗဈလက်ခဏာ တိတိကကြ ပွောဖို့က ခကျတယျ။ စမျးသပျစဈဆေးမှု မလုပျဘဲနဲ့ ပွောဖို့က အရမျးခကျတယျ။
မေး ။ ။ အခုလကျရှိ အမရေိကနျက ကူးစကျမှု အဆိုးဆုံး၊ အမြားဆုံး၊ လူသမှေု အမြားဆုံး နိုငျငံထိပျဆုံးမှာပဲ ရှိနဆေဲဆိုတော့ ဆရာတို့ အခု ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျရေးမှာ ဆရာတို့ အဓိကရငျဆိုငျနရေတဲ့ အခကျအခဲတှေ၊ စိတျချေါမှုတှကေ ဘာတှပေါလဲ။
ဖွေ ။ ။ စိနျချေါမှုတှကေတော့ အမြားကွီးပါပဲ။ ဒီနိုငျငံမှာက ကမ်ဘာမှာ အမွငျ့ဆုံးကူးစကျမှု ဖွဈနတေယျ။ အထူးသဖွငျ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးထဲမှာ ပြံ့နှံမှုတှကေ တနတေ့နဆေို့ရငျ လေးငါးသောငျး နစေ့ဉျ ရှိနတေယျ။ ဒါကကူးစကျမှု အနညျးဆုံး - တခြို့နတှေမှောဆိုရငျ သိနျးနဲ့ခြီပွီးတော့ ဖွဈကုနတယျ။ ဒီလို Community Transmission လူ့အဖှဲ့အစညျးထဲမှာ ပြံ့နှံ့မှု အရမျးမြားလာပွီဖွဈတဲ့အတှကျ အစိုးပိုငျးအနနေဲ့ သကျဆိုငျရာ ကနျြးမာရေးဌာနဆိုငျရာပိုငျတှကေ Contact tracking တှကေိုတောငျ သိပျမလုပျနိုငျတော့ဘူး။ လုပျလဲမလုပျတော့ဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အခွအေနကေ contact tracing လိုကျလုပျနိုငျဖို့အတှကျ resources တှေ ကနြျောတို့ဆီမှာ မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ တတျနိုငျသမြှ ရောဂါရှိမရှိ မြားမြားစဈမယျ၊ မြားမြားတှမေ့ယျ။ တှတေ့ယျဆိုရငျ ခကျြခငျး ဒီလူနာနဲ့ သူ့ရဲ့မိသားစုကို ခကျြခငျြးအိမျမှာပဲနခေိုငျးမယျ။ အကောငျးဆုံး treatment ပေးမယျ။ တတျသမြှ ဆေးရုံကို မချေါဘူး။ တျောတျောအခွအေနဆေိုးမှပဲ ဆေးရုံကို ပေးတတျတယျ။ ဒီလောကျအခွအေနေ မဆိုးဘူး၊ တျောရုံတနျရုံ အဖြား၊ ခြောငျးဆိုးလောကျပဲဆိုရငျ အိမျမှာပဲနခေိုငျးတယျ။ ဆေးခနျးမှာကုတယျ။ ဒီလောကျပါပဲ .. ဆေးရုံပေးတတျတာတို့၊ ကှာရနျတငျစငျတာ ပို့တာတို့ ဒါတှေ ကနြျောတို့ မလုပျဘူး။ လုပျဖို့လညျး အခွအေနကေ မပေးတော့ဘူး။ တနတေ့နေ့ သောငျးနဲ့သိနျးနဲ့ခြီပွီး ကူးနတော ဖွဈတဲ့အတှကျ။
မေး ။ ။ အဲဒီတော့ ဒီကူးစကျမှုအနအေထားအရကွညျ့မယျ၊ သဆေုံးမှု အနအေထားကို ကွညျ့ရတဲ့အခါကွတော့ ဘယျလိုလူတှမှော ပိုပွီးတော့ ကူးစဈမှုတှေ မြားနသေလဲ။ နောကျပွီးတော့ သဆေုံးတဲ့လူတှထေဲမှာ အသကျအရှယျအရဖွဈဖွဈ ဘယျအပိုငျးက သဆေုံးမှုအမြားဆုံး ဖွဈနသေလဲဆရာ။
ဖွေ ။ ။ ကနြျောတို့ အထူးသဖွငျ့ မတျလလောကျကစပွီး ရောဂါထိနျးခြုပျရေးဌာနအနနေဲ့ စောငျ့ကွညျ့နခေဲ့တယျ။ စောငျ့ကွညျ့တော့ ဘာတှရေ့သလဲဆိုတော့ အမြားစု လှနျခဲ့တဲ့ မတျလကနေ နိုဝငျဘာလအထိ အဲဒီကာလအတှငျးမှာ အမြားစု ကိုဗဈကူးစကျခံရသူ အသကျအရှယျပိုငျးက (၁၈) နှဈနဲ့ အသကျ (၅၀) အကွား လူငယျလူလတျပိုငျးတှပေိုငျးတှမှော အမြားဆုံး ကူးစကျခံရတာ တှရေ့တယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ သူတို့တှကေ အခွားအသကျအရှယျ ကလေးတှထေကျစာရငျ လူကွီးအသကျကွီးသူတှထေကျ ပိုပွီးတော့ အိမျပွငျပကို ထှကျတဲ့အတှကျ exposure ပိုမြားတယျ။ ရောဂါပိုကူးစကျခံရဖို့ အခှငျ့အရေးက ပိုမြားတော့ ပိုပွီးတယျ။ အဲဒီတော့ လူငယျနဲ့ လူလတျပိုငျးတှမှော အမြားစု ကူးစကျခံရတယျ။ ကူးစကျခံရတဲ့ (၅၀) ရာခိုငျနှုနျးကြျောကြျောလောကျက အဲဒီအသကျအရှယျပိုငျခွားမှာ အဓိကပဲ။ အမရေိကနျနိုငျငံမှာ လူကွီးဆိုရငျ (၆၅) အထကျလို့ သတျမှတျတယျ။ (၆၅) အထကျဆိုရငျ ကူးစကျရာခိုငျနှုနျးက (၁၅) ရာခိုငျနှုနျးအောကျလောကျမှာပဲ ရှိတယျ။ သိပျမမြားလှဘူး။ အဓိကသညျ လူငယျနဲ့ လူလတျပိုငျးမှာ အဓိကတှနေ့ရေတယျ.
သူတို့တှကေ အလုပျသှားတယျ၊ အပွငျသှားတယျ။ တှဆေုံ့ပှဲတှေ လုပျကွမယျ။ အဲဒီတော့ အဲဒီကနပေဲ အဓိက ကူးစကျခံရတာကို တှရေ့တယျ။ အဲဒီတော့ လူငယျနဲ့ လူလတျမှာ အဓိကကူးစကျမှုမြားတယျ။ ဒါပမေဲ့ သဆေုံးတာတှေ၊ ပုံမှနျရောဂါ ကူးစကျခံရတဲ့ လူငယျတှဆေိုရငျ အမြားအားဖွငျ့က ဒီအတိုငျးပဲ သူ့ဘာသာသူ ခပျမွနျမွနျ ပွနျပြောကျသှားတယျ။ သူတို့ရဲ့ ကိုယျခံစှမျးအားကောငျးတဲ့အတှကျ။ လူကွီးတှကွေတော့ ကိုယျခံစှမျးအား မကောငျးဘူး။ နောကျ လူငယျတှနေဲ့ လူလတျပိုငျးတှမှော သူတို့မှာ အခွခေံနောကျဆကျတှဲ ရောဂါ ရှိခဲ့ရငျ။ ဥပမာ ဆီးခြို၊ သှေးတိုး၊ ကြောကျကပျရောဂါ၊ အဆုပျရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါတှေ။ ဒီလို တဈခုခု ရောဂါရှိတဲ့ လူငယျလူလတျတှမှောပဲဖွဈဖွဈ၊ နောကျ အထူးသဖွငျ့လူကွီးတှမှော ဒီလိုလူတှမှောတော့ သဆေုံးနှုနျးက အရမျးကို မွငျ့နတောကို တှရေ့တယျ။ အထူးသဖွငျ့ အမရေိကနျမှာ သဆေုံးတဲ့လူ အခုဆိုရငျ နှဈသိနျးလောကျ ရှိပွီ။ အဲဒီတော့ ရှဈဆယျရာခိုငျနှုနျးက အသကျ (၆၅) နှဈအထကျ။ အဲဒီတော့ တျောတျောလေးကို အန်တရာယျကွီးတယျ။ အသကျကွီးတဲ့လူတှအေတှကျ။ (၁၅) ရာခိုငျနှုနျးလောကျကတော့ အသကျ (၅၀) နဲ့ (၆၅) နှဈကွား။ ဆိုလိုခငျြတာက အသကျ (၅၀) အထကျက (၉၅) ရာခိုငျနှုနျး သဆေုံးမှုထဲမှာ ရှိတယျ။ ဆိုတော့ ဘယျနိုငျငံမှာပဲဖွဈဖွဈ ဒါကွောငျ့လဲ အသကျကွီးတဲ့လူတှအေတှကျ အခွားရောဂါအခံ အကွောငျးရငျးတှရှေိတဲ့ လူတှေ တတျနိုငျသမြှ အိမျမှာပဲ နခေိုငျးတာ။ အဲဒီအခကျြကွောငျ့ပဲ။ ရောဂါပိုးခံရတဲ့လူက ရုတျတရကျကွညျ့ရငျတော့ လူငယျ၊ လူလတျပိုငျးမှာ မြားပမေယျ့ တကယျ့ complication တှေ၊ ရောဂါပိုဆိုးလာတာတှေ၊ သတောတှေ ပိုတှရေ့လာတော့ အသကျကွီးတဲ့လူတှနေဲ့ လူငယျလူလတျပိုငျးမှာဆိုရငျလဲ အခွခေံအခွားရောဂါ ရှိသူတှဖွေဈတာကွောငျ့ အဲဒါကွောငျ့ အဲဒီလူတှကေ ပိုပွီးတော့ ဂရုစိုကျဖို့လိုတယျ။
မေး ။ ။ အဲဒီတော့ ဒီဗိုငျးရပျဈက သူက အသကျအရှယျပျေါ လိုကျပွီးတော့ ဘယျလိုသကျရောကျမှုတှေ ရှိလဲ။ ဥပမာ ကလေးတှေ အရငျတုနျးက ကူးစကျမှုတှေ ရှိတယျဆိုတာတှေ ရှိလာပမေယျ့ အခုနောကျပိုငျး ကူးစကျမှုနှုနျးတှေ ဆကျပွီးမြားလာနတေဲ့အထဲမှာ ကလေးတှေ - (၁၈) နှဈအောကျ ကလေးတှေ၊ ဒါမှမဟုတျ မှေးကငျးစကလေးတှေ။ အဲဒီလိုမြိုးတှအေပါအဝငျ ဗိုငျးရပျဈရဲ့ သကျရောကျမှုက ဘယျလောကျအထိ ရှိပါလဲ။
ဖွေ ။ ။ ဒါကတော့ ဒီဗိုငျးရပျဈက အသဈအဆနျးလညျး ဖွဈတယျ။ ဘယျသူမှလဲ မတှဖေူ့းဘူး။ ကနြျောတို့ တတျနိုငျသမြှ တကမ်ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ဒတောတှေ။ အထူးသဖွငျ့ အမရေိကမှာ ဆေးရုံတှမှောရှိတဲ့ ဒတောတှကေို ကောကျယူပွီးကွညျ့ပွီးတော့ ဆုံးဖွတျကွတယျ။ ဒတောတှကေ ဘာပွနလေဲဆိုတော့ ကိုဗဈက တကယျ့တကယျကွတော့ အသကျနဲ့ တိုကျရိုကျအခြိုးကနြတောကို တှရေ့တယျ။ အသကျကွီးလလေေ၊ ကိုဗဈဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှု အခှငျ့အရေးက ပိုမြားလလေေ ဆိုတာကို တှရေ့တယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အသကျအရှယျက အရမျးအရေးကွီးတယျ။ အသကျအပိုငျးအခွား - ကိုယျက အသကျကွီးရငျကွီးသလို ကူးစကျခံရဖို့ အခှငျ့အရေးက ပိုပွီးမြားလာတာကို တှရေ့တယျ။ ဒါကတော့ တဈအခကျြပေါ့။ အရမျးလညျး အရေးကွီးတယျ။ အခုနပွောသလို လူငယျ၊ လူလတျတှမှော အမြားစုတှနေ့တေယျဆိုတာက သူတို့က အပွငျထှကျနှုနျးက ပိုမြားလို့။ တကယျ့တကယျကွတော့ အကုနျအသကျအကွီးအငယျမရှေး အကုနျလုံး အပွငျထှကျနမေယျဆိုရငျ လြှောကျပွီးသှားနမေယျဆိုရငျ လူကွီးတှကေ အဓိကထိမှာပဲ။ ဆိုလိုခငျြတာက ကူးစကျမှု အခှငျ့အရေး၊ chance and risk က အသကျနဲ့အမြှ အသကျကွီးလာလေ ပိုမိုပွီးတော့ အခှငျ့အရေး ပိုမြားလာမယျ။ အဲဒီလိုပဲ တခြိနျတညျးမှာပဲ ရောဂါဝငျသှားပွီဆိုရငျလဲ အသကျငယျသူထကျ အသကျကွီးသူက complication ပုံမှနျရိုးရိုးတနျးတနျး ပွနျပြောကျသှားမယျ့အစား အဆုတျကို ပိုမိုပွီး ပကျြစီးစတေဲ့ အရာတှေ ဖွဈလာတယျ။ တကိုယျလုံးမှာရှိတဲ့ အခွားကြောကျကပျတှေ၊ နှလုံးတှေ - ဒီလိုဟာတှကေိုလညျး ထိခိုကျနိုငျတဲ့ အခှငျ့ရေးက လူကွီးတှမှော ပိုမြားတယျ။ နောကျ လူငယျလူလတျဆိုလဲ အခွားရောဂါရှိတဲ့လူတှမှောဆို အခှငျ့ရေးက ပိုမြားတာကို တှရေ့တယျ။
မေး ။ ။ အဲဒီတော့ ကလေးတှမှော ဥပမာ မူလတနျးတှေ၊ အလယျတနျးတှေ၊ မူကွိုကလေးတှမှောကော သူတို့ကို ဗိုငျးရပျဈက ကူးစကျမှုနှုနျး နညျးတယျလို့ ပွောလို့ရသလား။ ဒါမှမဟုတျ ကူးစကျနပေမေယျ့လဲ သူတို့က ဘာမှ ရောဂါမပွဘဲနဲ့ ရောဂါဝဒေနာ မခံစားရဘူးလား။ အဲဒီလိုအရှယျတှကေ ဘယျလိုဖွဈလာမလဲ။
ဖွေ ။ ။ ကနြျောကတော့ relative term ပဲ ပွောတာပါ။ အသကျအရှယျတိုငျးမှာတော့ risk အန်တရာယျက ရှိနတေယျ။ လူကွီးနဲ့ ယှဉျရငျတော့ လူငယျတှကေ နညျးနညျးလေး risk နညျးတယျပေါ့။ အခုနပွောသလို အသကျကွီးလာလေ၊ အန်တရာယျကတော့ ပိုကွီးလာတဲ့ သဘောပေါ့။ ဒါပမေဲ့ လူငယျတှမှောကော မရှိဘူးလားဆိုတော့ အန်တရာယျကတော့ ရှိနတောပဲ။ ဒါကွောငျ့မို့ ကလေးတှမှောလညျး ကူးစကျခံရတာတှေ တှနေ့ရေတယျ။ ကနြျောတို့ ပိုကွောကျတာက အခုနပွောသလို probably အနနေဲ့ ပွောတာကတော့ risk က အသကျကွီးရငျ ပိုမြားတယျ။ ဒီလိုပဲ လူငယျလူလတျမှာလညျး ရောဂါအခွခေံရှိရငျ အန်တရာယျကွီးတယျ ပွောပမေယျ့ သာမနျကနျြးမာနတေဲ့ လူတဈယောကျကလညျး ဒီရောဂါဝငျသှားခဲ့ရငျ အခြိနျမရှေး သဆေုံးသှားနိုငျတာကို တှရေ့တယျ။ ကနြျောတို့ ခန်ဓာကိုယျက ပွနျပွီးတုံ့ပွနျတယျ။ တုံ့ပွနျတဲ့အခါမှာ တခါတလကွေတော့ ပုံမှနျထကျကို ပိုပွီးတော့ တုံ့ပွနျတာတှကေို တှရေ့တယျ။ တခြို့လူတှမှော လူငယျပိုငျးတှကေအစ … ဒီလိုတုံ့ပွနျမှုက ပုံမှနျထကျ ပိုပွီးမြားလာရငျ …. ဒီလူဟာ အရငျတုနျးက ဘယျလောကျပဲ ကနျြးမာကနျြးမာ သူ့ရဲ့ကိုယျခံစှမျးအား ပုံမှနျထကျ မတရားကို ပွနျပွီးတော့ တုံ့ပွနျတဲ့အတှကျ ဒီလူဟာ အခြိနျမရှေး သဆေုံးသှားနိုငျတယျ။ အဲဒါကွောငျ့မလို ကနြျောတို့ ကလေးလေးတှမှော ဒီအမရေိကမှာဆိုရငျ ကြောငျးတှေ တခြို့ပွညျနယျတျောတျောမြားမြားမှာ မဖှငျ့သေးဘူး။ မဖှငျ့တဲ့ရညျရှယျခကျြက ဒီကလေးတှေ risk က လူကွီးထကျစာရငျ နညျးပမေယျ့ တကယျ ဒီကလေးကို ပိုးဝငျသှားရငျ ဒီကလေးမှာ ဘာဖွဈမလဲဆိုတာကို ဘယျသူမှ မပွောနိုငျဘူး။ အခုနပွောသလို …… တှေ ဝငျလာမယျ။ ဒီကလေးရဲ့ body immunity ကိုယျခံအားတုံ့ပွနျမှုက ပုံမှနျထကျ ပိုမွငျ့လာပွီဆိုရငျ ဒီကလေးက သသှေားနိုငျတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ ကနြျောတို့ ကြောငျးတှကေို အခုအခြိနျအထိ တတျနိုငျသမြှ ပွညျနယျတျောတျောမြားမြားမှာ ပွညျနယျအုပျခြုပျရေးမှူးတှကေ မဖှငျ့သေးဘူး။
…. အမရေိကနျကူးစကျရောဂါ ကာကှယျထိနျးခြုပျရေး CDC မှာ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ ဒေါကျတာမငျးမငျးစိုး ကို ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။